Kadib Iscasilaadii Hailamariam Desalegn: Maxaa laga filan karaa xaaladda dalka Itoobiya? – Xeernews24
Kadib Iscasilaadii Hailamariam Desalegn: Maxaa laga filan karaa xaaladda dalka Itoobiya?
16. Februar 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Raysalwasaarihii Ethiopia Hailemariam Desalegn ayaa shalay warqaddiisii iscasilaadda gudbiyey. Iscasilaaddan la yaab ka ah ee Raysalwasaaraha Ethiopia ayaa ku soo beegmaysa xilli uu waddanku wajahayo buuq iyo jahwareer siyaasadeed.
Iscasilaadda Raysalwasaare Hailemariam Desalegn oo dad badan amakaag ku noqotay waxa sabab u ah dibadbaxyada iyo xasilooni la’aanta siyaasadeed ee waddanka Ethiopia hadheeyey muddooyinkii la soo dhaafay.
Raysalwasaaraha Ethiopia oo shalay shacabka reer Ethiopia la hadlayey ayaa yidhi “deganaansho la’aanta iyo dhibaatooyinka siyaasadeed [ee waddanka ka jira] ayaa sababay dhimashada dad badan iyo barakaca qaar kale”, waxa uu Raysalwasaaruhu intaas ku daray “Iscasilaaddayda waxa aan u arkaa mid muhiim u ah dedaalka loogu jiro in la sameeyo dibuhabaynno badan oo keeni doona nabad iyo dimuqraadiyad waarta.”
Raysalwasaaruhu waxa kale oo uu sheegay in uu si ku meelgaadh ah xilka u sii hayn doono inta Xisbigiisa iyo Baarlamaanka dalku ay ka aqbalaan iscasilaaddiisa, Raysalwasaare cusubna u soo dooranayaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/suaal.jpg 251 201 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-16 11:48:332018-02-16 11:48:33Kadib Iscasilaadii Hailamariam Desalegn: Maxaa laga filan karaa xaaladda dalka Itoobiya?
Qudbadii R/Wasaaraha Etoobia ee ku Saabsanaid Iscasiladiisa Lana Sheegayo in... Xukun Degdeg ah oo lagu soo rogay Itoobiya & Ciidamada oo la siiyay awood...